नगर प्रहरीले मोटरसाइकलसँगै लगेको हेल्मेट कहाँ हरायो ? | NewsKarobar
गृहपृष्ठ नगर प्रहरीले मोटरसाइकलसँगै लगेको हेल्मेट कहाँ हरायो ?
नगर प्रहरीले मोटरसाइकलसँगै लगेको हेल्मेट कहाँ हरायो ?
बौद्ध-जोरपाटी सडक कालोपत्रे गर्न माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका सहदेव चौंलागाईंको तीन तोलाको सिक्री ‘हराएको’ घटनाले बजार तताएको धेरै भएको छैन । गल्ती गर्ने प्रहरीलाई कारबाही भए पनि यस्ता घटना दिनहुँ कति भइरहेका होलान् भन्ने आशंका आमजनतामा बढेको छ ।
नागरिकको आशंकालाई थप बल पुर्याएको छ- निषेधित ठाउँमा पार्किङ गरेको मोटरसाइकलको हेल्मेट ‘हराएको’ घटनाले । घटना वैशाख ३० गतेको हो । पुतलीसडकको शंकरदेव मोडमा पार्किङ गरेर कुमारी बैंक छिरेका बेला भृकुटीमण्डपको सार्वजनिक पुस्तकालयका प्रमुख गोविन्द दाहालको मोटरसाइकल नगर प्रहरीले उठायो ।
काम सकेर उनी बाहिरिए । राखेको ठाउँमा मोटरसाइकल नदेखेपछि मन चिसो भयो । ‘सबै मोटरसाइकल छन्, मेरो मात्र छैन, हरायो कि क्याहो भन्ने लाग्यो,’ उनले भने, ‘तर पछि थाहा भयो, नगर प्रहरीले एक गाडी मोटरसाइकल उठाएको ठाउँमा फेरि अरु मोटरसाइकल पार्किङ भइसकेकाले झुक्किएको रहेछ ।’
उनी सरासर बग्गीखाना गए । गल्ती गरेको पश्चातापसहित महानगर प्रहरीलाई १ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिरे । साङ्लोले बाँधेको मोटरसाइकल लिएर जान खोज्दा हेल्मेट देखेनन् । नजिकै उभिएका ट्राफिक प्रहरीलाई उनले सोधे- मेरो हेल्मेट खोई ?
‘थाहा छैन, हेल्मेट थिएन होला,’ उनको जवाफ आयो । पार्किङ गर्दा हेल्मेट मोटरसाइकलमै छाडेकोमा दाहाललाई कुनै दुविधा थिएन । उनले मोटरसाइकल उठाउन जाने टोलीका नगर प्रहरीलाई बोलाउन आग्रह गरे । भित्रबाट एकजना महिला ट्राफिक प्रहरी आइन् र हत्तपत्त भनिहालिन्, ‘त्यो शंकरदेव, पुतलीसडक क्षेत्रबाट उठाएका कुनै पनि मोटरसाइकलमा हेल्मेट नै थिएनन्, फेरि जुन मोटरसाइकलमा हेल्मेट हुन्छ, उठाउनुअघि त्यसमा हामी बाइक नम्बर राखिहाल्छौं ।’
उनी जिल खाए । एकछिन केही सोच्नै सकेनन् । हेल्मेट पहिल्यै कसैले चोरिसकेको पो थियो कि ! उनी अब चाहिँ दुबिधामा परे ।
यसबीचमै अलि सिनियर नगर प्रहरी टिसर्ट र हाफ प्यान्टमा आएर उल्टै थर्काए । अरु नगर प्रहरीसमेत मिलेर ठूल्ठूलो स्वरमा हप्कीदप्की गर्न थालेपछि दाहाल अल्पमतमा परे । अरु नै उपाय खोज्ने योजनासहित आग्रह गरे, ‘मेरो मोटरसाइकल यहीँ साङ्लोले बाँधेर राखिदिनुस्, ब्लु बुक अफिसमा छुटेछ, पहिला लिएर आउँछु अनि मोटरसाइकल लान्छु ।’
तर, उनी कार्यालय गएनन् । बरु सिधै मोटरसाइकल पार्किङ गरेको ठाउँमा गए । कुमारी बैंकले सीसीटिभी क्यामेरा जडान गरेको छ कि भनेर चारैतिर हेरे । रहेनछ । नजिकै रहेको कन्सल्टेन्सीले सडकतर्फ फर्काएर राखेको क्यामेरा देखेपछि उनलाई अलि आश आयो । ‘एक सासमा माथि पुगें, हेल्मेट हरायो भन्दा नमान्लान् भनेर मोटरसाइकल हरायो भनेर फुटेज हेरिदिन आग्रह गरें,’ उनले भने, ‘नभन्दै फुटेजमा नगर प्रहरीले हेल्मेटसँगै मोटसाइकल उठाएको भेटियो ।’
उनी ठूलो साहससहित बग्गीखाना पुगे । महानगर सहायक प्रहरी निरीक्षक (सई) श्याम तिमल्सिनालाई फुटेज देखाएपछि सबैको बोली बन्द भयो । त्यसपछि इन्चार्ज तिमल्सिनाले आग्रह गर्न थाले, ‘कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ हेर्नुस् सर ! म तपाईंलाई अहिल्यै नयाँ हेल्मेट ल्याइदिन्छु, यसलाई यहीँ सकौं ।’
तर, गोविन्द यतिमा चुप बसेनन् । ‘मैले निषेधित ठाउँमा पार्किङ गरेकोमा गल्ती स्वीकारेर १ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिरें तर यसरी उठाइएका नागरिकको सम्पत्ति कसरी हराउँछ ? यसमा नियतको शंका छ, हेल्मेट लैजाने नगर प्रहरीलाई कारबाही हुनैपर्छ,’ उनले भने, ‘मैले जस्तै कतिले यसरी सामान हराइराखेका छन्, फुटेज नभेटिएसम्म तपाईंहरुले कस्तो व्यवहार गर्नुभयो र अहिले के भन्दै हुनुन्छ ?’
दाहाल चर्को स्वरमा प्रस्तुत भएपछि नगर प्रहरीले हेल्मेट खोजिदिने भयो । उनले मोटरसाइकल लान मानेनन्, नगर प्रहरीबाट चोरी हुनसक्ने आशंकासहित तेलसमेत नापेर मोटरसाइकल त्यहीँ छाडेका छन् । उनको हेल्मेट अझै भेटिएको छैन । भन्छन्, ‘मेरो आफ्नै हेल्मेट नभेटिएसम्म म मोटरसाइकल लान्न ।’
काठमाडौं महानगर प्रहरीका सई तिमल्सिना भने हेल्मेट मिस प्लेस भएर अर्कैले लगेकाले फिर्ता ल्याइदिसकेको बताउँछन् । ‘हामीले उहाँको हेल्मेट ल्याइदिसकेका छौं तर उहाँले लिन मान्नुभएको छैन,’ उनले भने, ‘यो सामान्य विषय हो तर उहाँले यसलाई ठूलो बनाइरहनुभएको छ ।’
पुस्तकालय प्रमुख दाहालले भने यसमा आपत्ति जनाएका छन् । ‘नयाँ हेल्मेट गायब पारेर मलाई जर्बजस्ती पुरानो हेल्मेट भिराउँदै छन्,’ उनले भन्छन्, ‘मलाई मेरै हेल्मेट चाहिन्छ र गल्ती गर्ने प्रहरीलाई कारबाही हुनैपर्छ । नत्र यस्ता घटना नदोहोरिएलान् भन्न सकिन्न ।’
‘सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्ति व्यभिचारी हुँदैनन् तर जति छन्, तिनले समाज र देशलाई नै भित्रभित्रै खोक्रो पारिरहेका छन् । हामीले यस्ता गतिविधिलाई सामान्य रुपमा लिएर छाड्नै हुँदैन,’ उनले भने ।
नगर प्रहरीले हेल्मेटसहित मोटरसाइकल लगेको दृश्य सीसीटिभी फुटेजमा हेर्न सकिन्छ ।
पछिल्लाे - एमालेका तीन नेतालाई लाइन लाएर प्रधानमन्त्री बनाएँ : प्रचण्ड
अघिल्लाे - प्रथम राष्ट्रिय पाक–कला प्रतियोगिता हुँदै